परीक्षण घटाऔं, हातलागी र जिम्मेवारी बढाऔैं | Aaja ko Shiksha
परीक्षण घटाऔं, हातलागी र जिम्मेवारी बढाऔैं
जाँड–रक्सीको कुलतबाट हुने हानी सिकाउन गुरुले एउटा प्रयोगात्मक जुक्तिको प्रदर्शन गर्न पुगे । एउटा पारदर्शी गिलासमा शुद्ध पिउने पानी र अर्कोमा तीनपाने रक्सी राख्दै दुईवटै गिलासमा पालैपालो ज्यूँदोे शंखेकिरा हाल्न पुग्छन गुरुले । केही क्षणमा रक्सीमा हालिएको शंखेकिराको जीवन गति सकिन्छ भने पानीमा खसालिएको शंखेकिरा चलायमान अवस्थामा नै देखिन्छ । जुन स्वाभाविक थियो । यो स्वभाविक प्रयोगको परिणामसँगै गुरुले यसलाई हेर्नेहरुलाई प्रश्न गर्न पुग्छन्, ‘ल आफैं बुझ्नुहोस्, यो प्रयोगबाट के बुझाउन खोजिएको हो ? के बुझ्नुभयो ? र, के सिक्नुभयो त ? ‘रक्सी पिउनेहरुको त पेटमा परेका किराहरु शंखेकिरा झैं स्वात्तै उत्तानो पर्ने रहेछन्,’ केही अवलोकनकर्ताको यो बुझाइसँगै वातावरण हासोले गुञ्जायमान हुन्छ । यो प्रसङ्ग प्रायःजसो पाठकहरु र सामाजिक सञ्जालमा चासो राख्नेका लागि नयाँ पक्कै पनि होइन । तर, अब प्रश्न आउँछ, गुरुको कुलतबाट हुने हानीको प्रयोगात्मक अभ्यास गलत थियो त ? पक्कै पनि थिएन । के त्यो व्यवहारिक प्रदर्शन थिएन त ? पक्कै थियो । के त्यो उपयुक्त शिक्षण रणनीति थिएन त ? उपयुक्त नै थियो । के सिकाउने तरिका नमिलेको हो त ? नमिलेको त प्रश्न नै आउँदैन । त्यसो हो भने भयो के त ? दिन खोजेको सन्देश किन बटारिएर बुझे ? अहम् प्रश्न यही हो । पठनपाठनमा आउने समस्या यसै विन्दुबाट शुरुवात भएका छन् । मूल समस्यालाई नजर अन्दाज गरे समाधानको बाटो आउने त प्रश्न नै आउँदैन । कक्षाकोठामा भएको यही हो । शिक्षकले पढाएकै छ । मानौं, सिकाएको पनि छ । बुझाउने प्रयत्न पनि गरेकै छ । तर, सिकारुले के र कुन रुपमा सिकेको छ ? त्यसको खासै हेक्का नराखी सिकाउनेले आफ्नै गतिमा पाठ्यपुस्तकका पाठहरु सक्ने धुनमा केन्द्रित छ प्रायःजसोको ध्यान ।
पढाउने तरिका ठिक तरिकाले भयो भन्दैमा सबैले समान रुपले बुझिहाल्छन् भन्ने कदापि हुँदैन । सिकाउनेले कुन विधि प्रयोग गरेर के सिकायौ भन्दा पनि सिकारुले त्यो विधिबाट के सिक्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । शिक्षकले के भन्यो भन्दा पनि विद्यार्थीले के ग्रहण ग¥यो ? त्यसको हेक्का हुनु अपरिहार्य छ । ग्रहण गर्ने (विद्यार्थी)को ज्ञान सीपको मापन पाठ्यक्रमले निदृष्ट गरिएको मापदण्ड अनुरुप नै हुने हो । तर, त्यो पूरा भएको छ त ?
निश्चित समय अन्तरालमा लिइने अध्यावधिक परीक्षा मात्रले बालबालिकाका ज्ञानको आधारशिला नै कमजोर भयो, एकथरी शिक्षाविद्हरुको निचोड रह्यो । र, परिणामस्वरुप विद्यार्थीको सिकाइ मापदण्डको निर्धारण गर्न हेतु निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको शुरुवात गरियो । निश्चित विषयमा दिइने अङ्कलाई ‘शत्रु’ मानियो र त्यो अङ्कगणितीय शत्रुलाई विस्थापित गरियो अक्षर रुपि ग्रेड प्रणालीले । त्यो अक्षर रुपि ग्रेड आउने कताबाट ? त्यही अङ्कबाट होइन त ? के त्यो अक्षर रुपि ग्रेड राख्दैमा परिवर्तन आयो त ? समस्या के हो ? त्यसको जडसम्म पुग्नुको साटो शब्दहरुको खेलमा फस्ने गरेको देखिन्छ । अङ्कको ठाउँमा ग्रेड राख्दैमा र ग्रेडको साटो अङ्क वा अरु कुनै नयाँ शब्दावली राख्दैमा मूल गुणस्तरमा कायापलट हुने प्रश्न नै आउँदैन । एकातिर कक्षा एकदेखि निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति लागू भएसँगै प्रायः शिक्षकहरु विद्यार्थीको गुणस्तर खस्कनुको दोष सरकारको फितलो शिक्षा नीतितर्फ औंला ठड्याउँदै आफूलाई दुधले धोएको सिद्ध गर्न आफ्नो वाकपटुतामार्फत् अग्रसर देखिन्छन् । अर्कोतर्फ निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति (क्यास)का पक्षधरहरु विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर खस्कनुको पूरापूर दोष शिक्षकको टाउकोमा थुपार्दै ग्रेडिङ प्रणालीको बचाऊ गर्नमा केन्द्रित देखिन्छन् । अङ्क बढी आए माथिल्लो ग्रेड मानिने हो त तल्लो ग्रेडले कम अङ्क आएको संकेत गर्ने हो । अतः ग्रेड र अङ्क एक आपसमा परिपूरक नै छन् । यसमा दोहोरी खेल्नुको कुनै तुक छैन ।
निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुभन्दा अगाडि र लागू भएपश्चात् वास्तविक उपलब्धिमा खासै फरक देखिँदैन । प्रायःजसो विद्यालयमा विद्यार्थीले सिकेको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उपलब्धि हात लागी तिनको हाराहारीमा भन्दा माथि जान सकेको छैन । अर्थात्, ३० देखि ३९ अङ्कबीचको हातलागी तीन । हातलागीको उच्चतम अंक दश अर्थात् सयमा सय अङ्कको प्राप्ति प्रायः असम्भव नै हो तर पनि हातलागी सातभन्दा माथि पुर्याउने सबैको ध्येय पूरा हुन अझै सकेको छैन । हातलागी वृद्धि गर्न पुनः अङ्क प्रणालीमा फर्कने कि निरन्तर मूल्याङ्कनको नै दह्रो वकालत गर्ने ? या कुनै अर्को परीक्षण गर्ने ? फेरि नयाँ परीक्षणले मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अर्को रनभुल्ल दिशातर्फ धकेल्ने प्रायः निश्चित भएकाले यसको कुनै तुक छैन । निश्चित समयमा लिइने अध्यावधिक परीक्षालाई मात्र आधार मानी पुरानै मूल्याङ्कन पद्धतितर्फ फर्कनुको पनि कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैन । आधारभूत तहमा अपनाइएको मूल्याङ्कन प्रणालीको ध्येय आफैंमा गलत थिएन । तर, विद्यालय तहमा प्रायः शिक्षकहरुले बुझ्ने तरिका जाँड–रक्सीको प्रभावलाई प्रयोगात्मक तरिकाले बुझाउने गुरु र बुझ्ने केही चेलाहरुसँग ठ्याक्कै मेल खायो । परिणामस्वरुप सिकाएर कक्षोन्नति गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रायः सिकाउनेहरुले सिकाउनै बिर्सेर कक्षोन्नतिमा मात्र केन्द्रित भए । शहरदेखि दुर्गम गाउँ–बस्तिका विद्यालय घुम्ने क्रममा पाइएको तितो यथार्थ हो यो । शिक्षकले सरकारद्वारा प्रयोगमा ल्याइएको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बोझिलो र कार्यभार थपिएको रुपमा बुझे । लागू गरिएको मूल्याङ्कन पद्दति थप कार्यभार नभई प्रत्येक दिन नियमित गरिने शिक्षण सिकाइको एउटा हिस्सा हो भन्ने स्वयं सरकार पक्ष र त्योसँग सम्बन्धित निकायले बुझाउन सकेन । सम्बन्धित निकायले ‘उपयुक्त तरिकाले बुझाएँ’ त भन्यो तर बुझ्नेले अर्कै रुपमा बुझे । अब नयाँ शिराबाट सिकाउनेले सिकारुले सही रुपमा बुझेको सुनिश्चितता गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसो भएमा शिक्षक स्वयं जिम्मेवार भई विद्यार्थीले कुन रुपमा सिकेको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
आममानिस र शिक्षासँग सरोकार राख्ने अधिकांशको बुझाइलाई सुन्ने, बुझ्ने, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने दश कक्षा उत्तीर्ण गर्ने परीक्षाको नाम एसएलसीबाट एसइइ राख्दैमा, प्राप्ताङ्क प्रतिशतलाई ग्रेडमा परिणत गरी दातालाई चित्त बुझाउन ‘परीक्षा दिने सबै सफल’ जस्ता परीक्षण र शब्दावलीले शिक्षाको ऊधो गतिलाई रोक्ने प्रश्न नै आउँदैन । त्यो त कसै–कसैको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । अतः यस्ता खाले नवीनतम् परीक्षणलाई बढाउनुको साटो शिक्षक स्वयम्लाई जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य छ । शिक्षक स्वयम्ले जिम्मेवारीको बोध गरी सोहीअनुरुप आफूमा रहेको क्षमतालाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न÷गराउन सके हातलागी क्रमशः वृद्धि हुनेमा विमती रहँदैन । एउटा परीक्षणको नतिजा विश्लेषण नगरीकनै कसैको दबाबमा वा निहित स्वार्थका लागि नयाँ–नयाँ परीक्षण गर्नुको साटो आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्ने/गराउने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र गुणस्तरले नयाँ उचाई प्राप्त गर्नेमा द्विविधा नरहँला । सबैको हित्तचित्त मिलोस् जिम्मेवारी निर्वाहमा । भलो सबैको ।
(लेखक, रिड नेपाल/हिमालयन ट्रष्ट युके नामक गैरसरकारी संस्थाका प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)